Umaki: Ukumakethwa Kwamaselula Nethebulethi | Martech Zone
Umaki: Ukumakethwa Kwamaselula Nethebulethi
Amathuba Okumaketha Asenhla, Okuthengiswayo, Nasezansi Kwokukhula Kwebhizinisi
NgeSonto, ngoFebhuwari 7, 2021 NgeSonto, ngoFebhuwari 7, 2021 Douglas Karr
Uma ubuze iningi labantu ukuthi libathola kuphi ababukeli balo, uvame ukuthola impendulo emincane kakhulu. Iningi lomsebenzi wokukhangisa nokumaketha uhlotshaniswa nokukhethwa komthengisi kohambo lomthengi… kepha ngabe lokho sekwephuze kakhulu? Uma uyinkampani yokubonisana noguquko lwedijithali; ngokwesibonelo, ungagcwalisa yonke imininingwane kuspredishithi ngokubuka amathemba akho amanje futhi uzilinganisele kumasu owazi kahle. Ungakwenza
I-UX Design ne-SEO: Zingasebenza kanjani lezi zinto ezimbili zeWebhusayithi ndawonye ku-Advantage yakho
NgoLwesine, Januwari 31, 2019 ULwesihlanu, February 1, 2019 UJohn Vuong
Ngokuhamba kwesikhathi, okulindelwe kumawebhusayithi sekuguqukile. Lokhu okulindelwe kusetha izindinganiso zokwenza ubuhlakani bomsebenzisi isayithi elinikezayo. Ngesifiso sezinjini zokusesha ukuhlinzeka ngemiphumela efanele futhi eyanelisa kakhulu ekuseshweni, ezinye izinto ezisezingeni ziyacatshangelwa. Enye yezinto ezibaluleke kakhulu kulezi zinsuku wukuhlangenwe nakho komsebenzisi (nezinto ezahlukahlukene zesayithi ezinomthelela kukho.). Ngakho-ke, kungacatshangwa ukuthi i-UX ibalulekile
I-RØDE Ikhipha I-Podcast Production Studio!
Lwesibili, Disemba 11, 2018 Lwesibili, Disemba 11, 2018 Douglas Karr
Into eyodwa engizokwabelana ngayo kulokhu okuthunyelwe yimali nesikhathi engichithe ukuthenga, ukuhlola nokuhlola imishini yama-podcast ami. Kusuka kusihlanganisi esiphelele nasesitudiyo, kusitudiyo esihlangene engingakwazi ukusiphatha esikhwameni, ngiye kuma-microphone e-USB engingawaqopha nge-laptop noma i-iPhone… Ngizame konke. Inkinga kuze kube yimanje bekulokhu kuyinhlanganisela yezivakashi ezikwi-studio nezikude. Kunjalo
Yimaphi Amakhono Wokumaketha Obaluleke Kakhulu ku-2018?
NgoMsombuluko, Okthoba 1, 2018 NgoLwesibili, Okthoba 2, 2018 Douglas Karr
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule bengisebenza kumakharikhulamu ezinkundla zokumaketha ezidijithali kanye nezitifiketi zenkampani yamanye amazwe kanye neyunivesithi, ngokulandelana. Kube wuhambo olumangalisayo - sihlaziya ngokujulile ukuthi abathengisi bethu balungiswa kanjani ezinhlelweni zabo ezisezingeni, nokukhomba izikhala ezizokwenza amakhono abo athengiswe kakhulu emsebenzini. Okusemqoka ezinhlelweni zeziqu zendabuko ukuthi ama-curriculae avame ukuthatha iminyaka eminingana ukuthi avunyelwe. Ngeshwa, lokho kubeka abathweswe iziqu
NgoLwesithathu, Februwari 21, 2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ukuchofoza ukuze ushayele kuvumela abathengi abangaba khona ukuthi bafonele ibhizinisi lakho ngokuchofoza okukodwa emiphumeleni yenjini yokusesha. Amakhasimende asathanda ukubiza amabhizinisi futhi chofoza-to-call kwenza kube lula kunakuqala ukuthi enze lokho. Imali engenayo yokuchofoza ukubiza umhlaba yayingu- $ 7.41 billion ngo-2016 futhi lokhu kulindeleke ukuthi ikhuphuke ifike ku- $ 13.7 billion ngo-2020 Empeleni, ama-61% wabasebenzisi beselula bathi ukuchofoza ukuze ushaye kubaluleke kakhulu esigabeni sokuthenga. Qiniseka ukuthi ibhizinisi lakho selimi ngomumo. Lokhu infographic